प्रचण्ड मारिएर केही फरक पर्दैन भन्ने रवि लामिछानेलाई कारबाही – पुरा हेर्नुहोस – PathivaraOnline
Home > समाचार > प्रचण्ड मारिएर केही फरक पर्दैन भन्ने रवि लामिछानेलाई कारबाही – पुरा हेर्नुहोस
प्रचण्ड मारिएर केही फरक पर्दैन भन्ने रवि लामिछानेलाई कारबाही – पुरा हेर्नुहोस
admin March 16, 2019 March 16, 2019 समाचार	0
२ चैत्र, काठमाडाैँ । पत्रिकारितामा विवादित बनेका न्युज २४ का प्रस्तोता रवि लामिछानेको अभिव्यक्तिलाई लिएर कारबाहीको आवाज उठेको छ । व्यक्तिगत तवरमा निकृष्ट गालीगलाैज गरिएको भन्दै अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले लामछानेमाथि कारबाहीको माग गरेका हुन ।
सुरेन्द्र बस्नेत, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष बस्नेतले लामिछानेले पत्रकारिताको खोल ओडेर अरु कर्म वा कुकर्म नगरुन् भन्ने चेतावनी समेत दिएका छन । बस्नेतले प्रचण्ड मारिएर केही फरक पर्दैन भन्दै न्युज २४ मा कुर्लदैं गर्दा के रबि लामिछाने पनि त्यही मिसनका अभियन्ता होइनन् भनेर उनले आफुलाई कसरी स्पष्ट गर्छन् ? भन्ने प्रश्न समेत गरेका छन ।
बस्नेतले लेखेका छन ‘प्रचण्ड मारिएर केही फरक पर्दैन भन्दै न्युज २४ मा कुर्लदैं गर्दा के रबि लामिछाने पनि त्यही मिसनका अभियन्ता होइनन् भनेर उनलेे आफुलाई कसरी स्पष्ट गर्छन् ? उनको त्यो वाणी सुनेपछि मलाई उनी पत्रकारिताको मर्म र धर्मभित्र भएजस्तो पटक्कै लागेन । यसलाई कार्वाहीको विषय वनाइयोस् । उनले पत्रकारिताको खोल ओडेर अरु कर्म वा कुकर्म नगरुन्।’
कैलालीबाट दुखद घटनाको खबर : बिच बाटोमा हत्या ( पूरा हेरि शेयर गरौ )
प्रचण्डका वरिपरि ५९ सुरक्षाकर्मी परिचालन, विप्लव समुहले मार्ने योजना बनाएको भन्दै सुरक्षा थ्रेट यसरी बढाइयो (पुरा विवरण हेरी शेयर गर्नुहोस्)
सूर्य हत्या प्रकरणः ४ वर्षसम्म रुँदै भौतारिन् आमा, ४ प्रहरी प्रमुख फेरिँदा बल्ल अनुसन्धान? आखिर यस्तो हुन्छ सत्य… भिडियोमै हेर्नुहाेस्
बाढी तथा पहिरोमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या ३० पुग्यो
नयाँ रेकर्ड : नेपालमा आज एकैदिन अहिले सम्मकै सबैभन्दा धेरै संक्रमित र मृ’त्यु !